Cabdi Maxamuud Cumar oo isku dayay inuu ka baxsado xabsiga – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo October 19, 2018 Uncategorized
Booliska dalka Itoobiya ayaa ku sheegay in Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar uu isku dayay inuu ka baxsado xabsiga.
Cabdi Maxamuud Cumar oo maanta ka la horgeeyay Maxkamad markii 5aad ayaa waxay Boolisku sheegeen iyada oo amnigiisa iyo caafimaadkiisa loogu daneynayo in cabdi lagu xiray xabsi ku dhex yaala xarunta booliska.
Sidoo kale Booliska ayaa sheegay in Cabdi uu soo jabiyey muraayadda daaqadda qolka uu ku jiray isagoona cunaha ku dhagay mid ka mid ah askarta ilaalada uga jirtay qolka uu ku xirnaa si uu u baxsado.
Cabdi Maxamuud Cumar eedda iskudayga ka baxsashada xabsiga ee ay boolisku u soo jeediyeen ayaa beeniyay kadib markii ay Maxkamadu weydiisay.
“Falkaas ma ahan mid aan sameeyay balse eedu waa mid lagu doonayo in lagu dilo sumcadeyda
mar ay maxkamadda wax ka weydiisay ayaa wuxuu ku jawaabay “inuusan falkaasi sameeynin eedduna ay tahay mid sumcaddiisa lagu waxyeelleynayo isla markaana lagu doonayo in jirdilkiisa lagu banneysto”.
Ugu dambeyn, maxkamadda oo codsiga booliska aqbashay waxay u m
Previous Soo dhoweeynti reer Ceelbuh ee Cabdirashiid Yusuf musharaxa Kursi Parlamaan
Next Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) uu qorsheynayo weerar lagu qaado ciidamada Somaliland ee ku sugan degaanada gobolka Sool.